Android 2.0.1 dhibaato xagga amniga ah ayaa ka jirta | Androidsis
antocara | | Motorola, Noticias, Amniga, Noocyada Android
Dhibaato xagga amniga ah ayaa laga helaa Android 2.0.1 version oo leh ku dhowaad dhammaan boosteejooyinka rakibay Motorola Droid gudaha Mareykanka Sida laga soo wariyey farsamada, Nidaamka qufulka qaabka ee la heli karo si loo kiciyo Nidaamka Android wuxuu leeyahay khalkhal amni, nidaamkan caadiga ah ma shaqeynayo. Iyada oo nidaamkani shaqeynayo, waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo qaab horey loo qeexay mar kasta oo aan dooneyno inaan furno boosteejada. Haddii aad isticmaaleyso qufulka terminal-ka ee la yiraahdo oo wicitaan la helo adoo si fudud u riixaya furaha Back ama Back, waa la furay oo waxaad si buuxda gacanta ugu haysaa taleefanka. Sidan ayaad ku heli kartaa dhammaan xogta ka jirta taleefanka, xisaabaadka emaylka, kalandarka, xiriirada iyo wax kasta oo aan ku dhex leenahay.
Afhayeen u hadlay Google oo wax laga waydiiyay xaqiiqadan ayaa ku jawaabay inay la socdaan dhibaatada ayna rajeynayaan inay xalliyaan waqti yar.
Waxay umuuqataa inay kaliya kudhacdo nooca Android 2.0.1 markaa "nasiib wanaag" dhibaatadu ma ahan mid aad u baahsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » Android 2.0.1 waxay leedahay dhibaato xagga amniga ah
kan xun dijo
Goorma ayuu taariikhdu si rasmi ah uga soo bixi doontaa Spain?
Ku jawaab elmonomalvado
Waxaan rajeynayaa inaan dhaqso u xaliyo
Si kastaba ha noqotee, waligay kama daalin inaan dhaho waxaan rabnaa 2.x in Hero hadda!
Jeez, kuwan ka socda HTC waxay qaataan ukun!
Waa hagaag, illaa iyo hadda waxa aad u aragto in dhibaatadu aysan ahayn mid culus laakiin yaa og markii ugu dambeysay ee aan ka maqlo dhibaatada taleefannada casriga ah waxay ku saabsanayd Black Berry, dadka isticmaala ma soo gali karaan shabakadaha bulshada iyo wixii la mid ah, si dhakhso ah ayey u faaftay, laakiin yeynaan noqon awood u lahaanshaha helitaanka waa hal shay, laakiin xogtaas waa la xadi karaa ama wax la mid ah waxaan u arkaa mid ka sii daran. Sikastaba, taasi waa sababta aan u doorbido Windows Phone, runtu waxay tahay waan jeclahay OS-ga intaa ka sii badan, gaar ahaan awoodeeda inay wax ka bedesho dukumiintiyada
Hagaag, fiiri dadka isticmaala SAMSUNG GALAXY, masaajidka aan xambaarsanahay hadii aysan aheyn midowga geeks-yada meerahan xitaa maheysan laheyn eclair 1.2 (android 2.0) i7500 ..
Samsung waa shirkad ka tagtay kuwa masiirkooda ku aaminay markay iibsanayaan moodelkooda galax ... waa ceeb.
Ku jawaab Emili
Ma i caawin kartaa markii aan furayay qaabka taleefanka gacanta ee HTC MYTOUCH 3G SLIDE, ma waxaan qeexay qaab "X" ka dibna waxaan sameeyay isku dayo badan oo taleefankayga gacanta ayaa iga xirmay ... Ma jiraa qof i caawin kara?
Ku jawaab toto
07 / 05 / 2011 at 9: 41 pm
Waxaan ilaaway hannaankii lagu furi lahaa shaashadda Huawei UM840, aniguna ma isticmaali karo taleefanka gacanta gabi ahaanba, gebi ahaanba waa xanniban yahay, waxbana ma heli karo. Sideen ku hagaajin karaa tan. Ma igu caawin kartaa arintan fadlan !!! Mahadsanid, ilaahayna haku barakeeyo
Ku jawaab yusneidy
Waxaan haystaa LG optimus one oo lammaanahaygu wuu xannibay hannaankii, markaa waxay i weydiinaysaa koontadayda google oo waan gelinayaa, waxba ma qabto do .Maxaan samayn karaa
Waxaan hayaa kaniiniga iskutallaabta ah ee 'android 2.2' mana xasuusto miiska loo-shaqeeyaha, qof ayaa i caawin kara, waa deg deg oo maanta ayaan u isticmaalaa
Ku jawaab Yep
Ford Sync App, ku xiro Android Ford